Nhau - Kutaura nezve Unyanzvi hweKushandisa huni cnc router
Kutaura nezve Unyanzvi hweKushandisa huni cnc router
Patinoshandisa iyo huni cnc router, hazvidzivirirwe kuti isu hatizosangana nerimwe basa rinonetsa, rinotora nguva uye rinonetesa, riri kunetsa zvikuru. Muchokwadi, kana uchishandisa ahuni cnc router kuita rudzi urwu rwebasa, kune humwe hunyanzvi hunogona kuteverwa, uye hunyanzvi uhu hunogona kuita kuti basa redu ribudirire. Zvino, ngatidzidze hunyanzvi hwakajairika nesu.
1. Kunyora kwepurasitiki mapatani
Zvekunyora mapurasitiki mapuratifomu, unogona kunamatira tepi yekuchinjisa kumusana kwechinhu chakatemwa, wobva wamwaya parutivi netepi iri pane yakasviba girafu, wozoinamira pane iyo inogona kuraswa, kuitira kudzivirira kushandiswa kwetape-mativi tepi. Inosiya nzvimbo yakaoma kunetswa.
2. Kugadziriswa kwezvivezwa zvisina kujairika
Kune izvo zvinhu zvakavezwa zvine zvimiro zvisina kujairika, zvinoita kunge zvakamisikidzwa padenga, uye zvichazungunuka zvichidzoka kana zvamanikidzwa pasi. Panguva ino, iwe unogona kuyedza kuisa imwe marara pasi pechinhu kuti uwedzere kukakavara. Imwe yacho ndeyekuchengetedza iyo yekupaka inouya nechinhu. Kunyangwe icho chinhu chisina kuumbwa zvakaenzana, kurongedza kwainotakura kunogona kuve kwakajairika uye kuri nyore kugadziriswa. Wedzera tambo diki kuti ugadzire chisina kugadzirwa chinhu. Nyore kugadziriswa.
3. Kugadziriswa kwechinhu chakavezwa
Sezvo michina yekuveza huni inowanzo kuve nemapirita anoverengeka kana chucks, uye akagadzirwa nesimbi, zviri nyore kukonzera kukuvara kwechinhu chakatemwa kana kuita kuti itsvedze panguva yekuveza, saka sarudza mamwe makapuro erabha kana machubhu erabha eiyo Kugadziriswa kwechinhu chakatemwa kunogadzirisa iyi mhando yedambudziko rekukuvadza kune imwe nhanho.